FASAL CANAB "ANYUTA" - VITICULTURE
Fasal canab "Anyuta"
Qaar badan oo naga mid ah oo leh rabitaan weyn ayaa kori doona dalagyada beerta kala duwan ee xagaaga xagaaga.
Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer waxaanu awood u leenahay inaanu waqti ku filan si aan u daryeelno.
Xulashada ugu fiican ee kiiskan waa doorashada ah ee noocyo, taas oo kaliya oo kaliya iyo uma baahna fiiro badan.
Xaaladda doorashada ee noocyada kala duwan ee canabka, doorasho aad u fiican ee beeralayda bilowga ah iyo dad aad u mashquulsan waa "Annie" canab.
In kasta oo xaqiiqda ah in kala duwanaanshahan uu leeyahay tiro badan oo faa'iido leh oo uu awood u leeyahay inuu ku raaxaysto dalag aad u fiican, uma baahna fiiro gaar ah wuxuuna awoodaa inuu la qabsado xaaladaha sii kordhaya ee kala duwan.
Waxaan soo bandhignaa siraha iyo astaamaha canab "Annie"
Kala duwanaantan caleenta ah waxay ka mid tahay koox ka mid ah abuurista hindida caanaha ee magaca Krainov. Waad ku mahadsan tahay xiisaha iyo dadaalka ee winegrower this, noocyada kala duwan "Anyuta" helay dhammaan sifooyinka wanaagsan ee foomamka waalidka - canab Talisman, kuwaas oo lagu soo gudbay kala duwan ee "Kishmish Radiant".
Natiijo ahaan, noocyada cusubi waxay u muuqdeen kuwo aad u adag, awood u leh inay si fudud u dhidibbada u qabsadaan. Sababtuna waxay tahay, isweydaarsiga noocyada kala duwan waa mid ballaadhan: laga bilaabo qaybaha koonfurta ee Ukraine iyo Ruush, ilaa qaybaha cimilada ee dalalkaas.
Cinabta qaababka "Anyuta": muuqaalka, cabbirka iyo sifooyinka midhaha
Grapes "Anyuta" waxay leedahay muuqaal qurux badan, oo lagu qiimeeyo sida canab ganacsi oo si fiican loo iibiyay. Celcelis ahaan, miisaankoodu wuxuu u dhexeeyaa 0.7 ilaa 1.2 kilo, laakiin waxaa jira qiyaaso 1.5 kiilo. Qaabkoodu inta badan waa la xiraa, berry ma aha mid si adag loo dhigo, oo farabadani wax yar oo dabacsan.
Miro badan oo casaan mugdi ah waxay siiyaan xuruufta gaarka ah ee farabadan. Miisaanka dhogorta leh ee qaababka kala duwan ee celceliska noocyada kala duwan ee 10-14 illaa 20 garaam, taas oo ah tilmaame aad u sarreeya oo canab ah. Dhismaha fareeshka ee berrinka iyo maqaarka cufan wuxuu ka dhigayaa berry ku habboon gaadiidka. Marka la cuno, berry waxay leeyihiin dhadhan aad u jilicsan, taas oo ay la socoto caraf udgoon oo gaar ah.
Waa maxay dalagyada laga filan karo canab "Annie"?
Daaqsi ah noocyada canabka ee sabiibta ah waxay leeyihiin koritaan aad u xoogan. Waqtiga gelitaanka xilliga jiilaalka, oo bilaabanaya 4-5 sano ka dib markii la beero, waxay si fudud u garaaci kartaa xitaa taageero 3-mitir. Xilliga Berriga ee beergooyska Anyuta canabku waa qiyaastii 140 maalmood, taas oo suurtogal u ah in lagu kala saaro noocyada kala duwan ee bartamaha Bisaylkiisa. Sidaa darteed, waxaa suurtogal ah in si nabadgelyo ah loo bilaabo goosashada dalagyada dalacsan maalmaha ugu horreeya ama ku dhowaad bartamaha bisha Sebtembar.
Isla mar ahaantaana, wax-soosaarka noocyo kala duwan ayaa aad u sarreeya, badanaa xitaa xayiraadda baadiyaha. Si aad u ilaaliso duur this ka, waxaad isticmaali kartaa manjooyin dayrta iyo nidaaminta tirada caleemaha iyo canab. Waxa kale oo ay u qalantaa in la xuso in geedka canabka ah iyo caleemaha baadiyaha ay u bislaadaan si fiican oo badankoodu waa kuwo miro dhal ah.
Waxaa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan noocyada of canab khafiif ah.
Maxay yihiin faa'iidooyinka canab "Anyuta" oo aad u baahan tahay inaad ogaatid beeraleyda asaasiga ah?
Kala duwanaantani waa mid aad u sahlan in la koro, inkastoo dabcan ay u baahan tahay qaar ka mid ah tallaabooyinka khasabka ah si ay u daryeelaan. Laakiin guud ahaan, tayadaasi waxay u qalantaa dareen gaar ah:
• Dalag tayo wanaagsan leh, oo ku habboon isticmaalka cusub iyo qiimo ahaan sida alaabta iibka.
• Gaadiidka dalagga ee fiican ee masaafo dheer xitaa heerkulka sare.
• Wax-soo-saarka sare, xitaa iyada oo aan si taxadar leh u daryeelin.
• Awoodda canab si loo ilaaliyo sifadooda ilaa ay ka gooyaan geedka canabka ah.
• Awoodda is-isu-macaamilka, taas oo macquul ah sababtoo ah joogitaanka ubax labadaba.
• Foornada miraha lama helin xaalad kasta.
• Buundada canjaha ee Anyuta waxay leedahay difaac aad u wanaagsan oo cudur fungal ah. Maqnaanshaha ku dhufashada baadiyaha leh xiirid ama xayr, xitaa adigoon fulin buufinta ka hortagga canabka.
• Ciridka iyo cayayaanka kale ma waxyeeleeyaan dalagyada.
• Badbaadinta canab si heerkulka qaboobaha ah: dhaawaca lama arko xitaa -22ºS. Si kastaba ha noqotee, weli maaha mid kufilan in laga ilaaliyo hoyga xilliga qaboobaha.
• Excellent chering cherenko fiicanin, laga soo goostay canabkiinna canabkiinna ah "Anyuta". Dhab ahaantii rootstocks canabkuna waxay ku habboon tahay in lagu gooyo gooynta.
Cunto "Anuta" canab: Dhibaatooyinka la kulmi karo marka ay korayaan noocyada kala duwan
Noocyo canab ah oo aan fiicnayn ayaa jira mana jiraan, halka ay jiraan faa'iidooyin, waxaa sidoo kale jira faa'iido darro. Si aanad ula kulmin wax yaab leh, waxaan kugu dedaali doonaa dhamaan sifooyinka "Annie" canab, xitaa qallalan:
• Cunto-qabayaal badan, oo ku saleysan xirfadahooda, ku doodi in muddada bislaanshaha ee midho beereedka Anyuta marwalba mar uun dhacdo. Xaaladaha cimilada iyo qaababka cimilada ee la socotay baadiyaha oo dhan xilli ciyaareedkan ayaa door weyn ka ciyaaraya. Sidaas awgeed, canabku inta badan waxay gaadhaan qaangaadh aan dhexdhexaad ahayn bartamihii Sebtembar, laakiin qaybta labaad ee bisha.
• Haddii goosashada aan laga goyn duurka muddo dheer, miro ayaa luminaya muuqaalkooda iyo dhadhanka aasaasiga ah, laakiin jidhkoodu wuxuu noqon karaa biyo, sida xuubka xuubka.
• Berry wuxuu ka kooban yahay qiyaastii 4 abuur, taas oo, inkastoo ay yar yihiin, waxay weli saameyn ku yeelataa saamaynta dhadhanka canabta Anyuta ee iyaga u gaar ah.
• Sanadihii ugu fiicnaa iyo in ay joogaan ciidda bacrin ah, baadiyaha waxaa lagu dhufan karaa dalag iyo sababtan awgeed waxay u baahan tahay midabaynta tirada canab.
• Iyadoo roobab xoog leh iyo qoyaan badan, canjiga Anyuta ayaa jabin kara.
• Inkasta oo ay jirto iska caabin adag oo dhaxan, barafku waa in la daboolaa. Mararka qaarkood waxay xakameyn kartaa xididdada baadiyaha.
Sida loo abuuro canabka si ay u noqoto Klondike dhab ah oo miro ah oo dhadhan fiican leh: talooyinka ugu muhiimsan
Canab beerto ayaa si fudud u fudud, inkastoo ay aad u adag tahay in la sameeyo iyada oo aan xitaa diyaarinta qaaska ah. Xaqiiqdii, adigoon u hoggaansanayn xeerarka oo idil, way sahlan tahay in la burburiyo labada dhagax iyo jarista. Waxa kale oo muhiim ah in la helo meel wanaagsan oo loogu talagalay koritaanka baadiyaha canabka ah. Waan ka warbixin doonaa dhammaan faahfaahintaan oo dhan faahfaahin dheeraad ah.
Waa maxay farqiga u dhexeeya beerto canabka iyo jaridda dhirta?
Nooca nooca soo degida ee aad doorato maaha mid dhab ah. Marka laga hadlayo geedo, waxaad ku beeri doontaa goynta horay loo go'aamiyey ee xididdadaada. Sababtaas awgeed, waxaa jiri doona suurtagalnimada in cudurada uu ka soo horjeeda aan loo wareejin doonin baadiyaha cusub. Haddii, si kastaba ha ahaatee, inuu ku daboolo jirida si ay u noqoto kaydkii hore, waxay cadeyn kartaa, inkastoo aan isla markiiba, cudurkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, dhinaca kale, waa loo yaqaan "grafting" waa sida ugu fiican ee loo beeray canab. Xaqiiqdii, iyada oo u mahad naqeysa, baadiyaha cusub ee canabka ah wuxuu horumariyaa si ka dhaqso badan oo ka fiican, maaddaama ay mar hore leedahay nidaam xidid oo si fiican u horumarsan oo quudiya. Geed canab ah oo lagu beeray xididada u gaar ah ayaa si dhib leh u qaadaya si tartiib tartiib ah.
Xulashada goobta iyo sifooyinka buugta beertida canabka ah
Canabtu si fiican ayey u koraan oo waxay midho u dhali karaan halka uu ku yaallo qoraxda iyo kulaylka ku filan. Haddii kale, berry ayaa laga yaabaa inay u rusheeyaan si tartiib ah oo aan si siman lahayn. Sababtan awgeed, waxaa lagu talinayaa in geedo canab lagu beero dhinaca koonfureed ee dhismayaasha guryaha. Waxay u adeegi kartaa sida wanaagsan ee guryaha ama guryaha. Intaas waxaa sii dheer, dhismayaasha waxay ka ilaalin doonaan canabka ka soo baxa qoraallo kuwaas oo ku dari kara inflorescences.
Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa muhiim in la doorto ciid wanaagsan oo canab ah. Inkasta oo dhaqankan aan gaar ahaan dalbaneynin arrin sidaasi ah, haddana si fiican ugama gudbi karto ciidda inferiifka ah. Sidaa darteed, kiis kasta, ciidda ka hor beerto waa in si wanaagsan loo bacrimiyo oo qodo.
Haddii biyuhu dhulka kuugu dhow yihiin dusha ciidda, waxaa lagama maarmaan ah in la dhiso nidaam dheeri ah goobta, iyo diyaarinta ceelka canabku wuxuu dhigaa lakabka jajabka ee hoose.
Waxaa muhiim ah in la tixgeliyo marka la beero geedo dhowr ah si ay ugu baahdaan booska koritaanka. Tan iyo tan canab "Anyuta" waxay leedahay geedo xoog leh oo koraya, waxaa lagama maarmaan ah in laga fogaado inta u dhexeysa geedo sabiib ah oo ku saabsan mitir. Isla mar ahaantaana, haddii aad beerto canjeer ku dhow guri leh aasaas qoto dheer, waxaad u baahan tahay inaad ka baxdo dhismaha qiyaastii 70 sentimitir.
Marka canab lagu beeray: sifooyinka guga iyo beeritaanka dayrta
Taariikhda saxda ah ee saxda ah ee lagu beeray canab "Annie" maya. Ka dib dhan, waxaa la beeray karaa labada guga iyo dayrta. Xilli kasta wuxuu leeyahay faa'iido iyo faa'iido gaar ah.
1. Qaar badani waxay aaminsan yihiin in canabku helo xidid ka fiican haddii la beeray guga. Xaqiiqdii, inta lagu jiro xilliga xilli ciyaareedka koowaad ee korniinka, baadiyaha dhalinyarada ah waxay maamulaan si fiican uuna u koraan, sidaas awgeed xilliga qaboobaha koowaad maahan mid aad u xun. Laakiin dhinaca kale, badanaa April iyo May, marka dhirta oo dhan ay bilaabato sii kordhaya iyo marka ay tahay wakhtigii lagu beeri lahaa canab, ciidku wuxuu noqonayaa mid qalalan. Sidaa daraadeed, kaliya baadiyaha loo beeray waa in la waraabiyaa wax badan oo joogto ah, waana tan dheer oo aan dhib lahayn.
Laakiin dhibaatada ugu weyn ee beeritaanka guga canabku waa maqnaanshaha tiro badan oo geedo, goosashada taas oo dhacda isla xilliga dayrta. Sidaa darteed, marar badan waa adag tahay in la doorto sapling aad u baahan tahay, taas oo noqon doona mid caafimaad qaba oo aan waxyeello.
2. Seedling beeray oo la beeray dayrta, mabda 'ahaan, waxaa si fudud loo kaydiyaa ciidda ilaa guga. Haddii aan si fiican loo daboolin, waxay si fudud u xakameyneysaa, maadaama aysan awoodin inay ku noolaato. Sababtan awgeed dad badani ma abuuraan canab waqtigan. Laakiin dhanka kale, oo leh roobab badan oo roobab ah bartamihii bishii Oktoobar, marka wakhti ku habboon beerto canabku yimaado, baadiyaha yar yar xitaa ka hor inta aan la karin waqti u helo si fiican u buuxsamay qoyaan, kaas oo si weyn u xoojin doonaa caabbinta dhaxan.
Intaa waxaa dheer, canab ah beeray dayrta ayaa si dhakhso ah u kori doona guga waxayna awoodi doonaan inay horumariyaan xilliga xagaaga.
Xeerarka abuurka canabkiisa "Anyuta" oo ah xididadooda
Marka uu helo sapling wanaagsan, waxaa muhiim ah in si sax ah loo beero. Ha ku shubin bakhaaradaas oo kale sida diyaarinta ceelka iyo xannaaneynta canab kadib marka la beerto. Waa waqti aad u badan in la diyaariyo ceelka for seedling canab marka loo eego si toos ah. Waa inay jirtaa waqti ku filan ciidda godadka si ay u degaan ugu yaraan wax yar. sababtoo ah xaqiiqdu waxay tahay in godka sabiibku waa in si taxadar leh loo bacrimiyo, isagoo isku daraya isku dar ah Bacriminta iyo ciid wanaagsan oo bacrin ah.
Sababtan awgeed, qoto dheer ee godadka waa in uu ahaado ugu yaraan 80 sentimitir. Fidinta waa inay ahaato mid haboon. Sidaa darteed, ka hor inta beerto canabku waa in ay ka kooban tahay:
• Lakab 5-sentimitir oo ah xashiish, oo lagu shubo hoose.
• Layer of humus, Bacriminta macdanta (potassium, fosfooraska, birta) iyo ciidda bacrin ah.
• Lakabka xayawaanka aan ceelka lahayn, kaas oo u adeegi doona farqiga u dhexeeya xididdada yaryar iyo Bacriminta aan weli wakhti u helin si ay u burburiyaan una waxyeeleyn karaan xididada.
Next waa in la sameeyo sapling. Caadi ahaan waxaa lagu iibiyaa koob oo carrada, sidaas darteed foomkan si toos ah ayaa loo beeray (ka qaadida kaliya koobka). Waxa kaliya oo muhiim ah in aad si aad u badan u biyo udajiso ciidda ugu badan. Haddii aad iibsatay sapling oo aan lahayn ciid, markaas waa in sidoo kale la qabtaa maalmo badan oo biyo ah waxaana sidoo kale lagugula talin karaa in la gooyo xalka koritaanka-kobcinta.
Next, waxaan u dhigo seedling ee ceelka, ka tago collar xididka ka sareeya dusha sare, si taxadar leh u aasaa ciidda iyada oo aan Bacriminta. Tan ka dib, sapling waxaa si badan u waraabiyo, iyo ciidda ku wareegsan waxaa la jebiyey by mulch.
Iskalajinta canabka "Anyuta" ee saamiyada
Si ay jiridu u si fiican u riixdo rootstock, waa in la gooyaa habdhaqan-qaabaysan oo sidoo kale lagu qabto biyo muddo wakhti ah. Si aad u ilaaliso qoyaanka waxa ku jira, qaybta kore ee jarida ayaa la duugay. Suufka ka hor inta aan la jarin waa mid si fiican loo nadiifiyey, la waraabiyey, iyo yar yar oo la yiraahdo waa mid dhexdhexaad ah. Waxay ku jirtaa farqigan iyo jarista jarista. Haddii saadku uu aad u ballaaran yahay, waxaad ku kici kartaa dhowr gooyn markiiba.
Si xiriirka u dhexeeya jarista iyo qoryaha alaabada ka soo baxda si ka wanaagsan, goobta meeshi ayaa si adag loo adkeynayaa. Dad badan ayaa talo ka bixiya meesha tallaalka si ay ula socdaan dhoobo qoyan: waxay dib u celisaa hawada hawada meelaha dhaawaca ah ee canabkana waxay haysaa qoyaan.
Hantid ka dib tallaalka ayaa sidoo kale waraabiyay. Aad ayay u fiicantahay in la daboolo ciidda ku hareereysan oo ku aasaari taageerada ku xiga si ay u xiirto baadiyaha.
Daryeelka noocyada baadiyaha ah ee daaqa "Annie": si kooban ku saabsan sheyga ugu weyn
• Guga, markaad furto baadiyaha ka dib jiilaalka, waxaa sidoo kale lagula talinayaa in aad si fiican u waraabiso. Haddii aad haysato fursad sidaas ah, markaa waa inaad waraabisaa baadiyaha xitaa ka hor inta aan ubaxin iyo marka la dhammaystiro nidaamkan. Inta lagu jiro abaaraha, canabku waxay u baahan doonaan waraabin dheeri ah. Hal canab oo qof weyn ah oo loogu talagalay hal waraabka ayaa u baahan ugu yaraan 5 baaldi biyo ah.
• Ka dib markaad waraabiso, aad bay muhiim u tahay in lagu daboolo ciidda agagaarka jirridda daaqsinka leh mulch. Waxay ku caawin doontaa in lagu ilaaliyo qoyaan ee ciidda waxayna u adeegi doontaa bacriminta.
Mulchka ugu wanaagsan ee canab - balka madow ama dhoobada, xaaladaha ba'an - humus.
Sidoo kale, canab khafiif ah waxaa lagu quudin jiray humus iyo Bacriminta Fosfooraska-potassium.
• Marka la gaaro xilliga dayrta iyo bilowga xilliga xasilloonaanta, baadigoobka wakhtiga ugu habboon ee caleemaha iyo manjooyin. Marka la eego in nooc kasta oo Yamuta ah uu leeyahay geedo xoog leh, manjooyin waa inay noqdaan kuwo xoogan. Baadhitaan kastaa waa la gaabiyaa ugu yaraan 6-8 godood. Waa inaadan ka xumaanin baadiyaha, sababtoo ah sidan, waxaad isku dayeysaa inaad hagaajiso tayada dalagga, kaas oo aad heli doonto sanadka soo socda.
• Canabka xilliga dayrta "Anyuta" ayaa sidoo kale u baahan inuu daboolo. Haddii tani ay tahay mid cusub oo la beertay ama mid dusha laga saaray, ka dibna waxa fiican in lagu seexdo ciid. Sidaa daraadeed ma aha mid waxyeello gaarsiisan, weel ka mid ah ayaa lagu rakibay dusha sare ee dusha sare ee buurta buuriga ah. Si hoygaas oo kale ah looma dhicin xasilloonida xilliga qaboobaha, waxay u baahan tahay in lagu xoojiyo qalabka la hagaajiyey: kuraasta, xayawaanka, mooska ama laamiyada waaweyn. Si ay u daboosho bushar weyn oo canab ah, filim ayaa la soo saaraa waana wax la mid ah aqalka dhirta lagu koriyo. Ha iloobin in ay tixgeliyaan in, ka duwan ciid, ka filnayn filimku ma ogolaanayo hawada, sidaas darteed waa inaad si joogto ah ula socotaa xaaladda baadiyaha hoos yimaada.
• Inkastoo ay ka soo horjeedaan caabbinta wanaagsan ee "Anyuta" ka hor cudurada fungal, ma noqon doonto mid aad u adag in lagu buufiyo diyaarinta fungicide. Moobeyl waxaa lagu fuliyaa ka hor inta ubax of baadiyaha iyo inta lagu jiro formation of canab on ubaxyada.